Computer Technical Notes & Sharing Softwares: May 2009
1. You have to createaFacebook Phisher to hack someone's Facebook account password. Check out my article on How to make Facebook Phisher and create one.
In that article, simply replace www.myspace.com with www.facebook.com and you will getaFacebook fake login.
2. Now, when you have got the Facebook Phisher, simply register for an account at 0009.ws. Login to your account, go to File Manager and upload this Facebook Phisher created in Step 1.
3. After uploading, copy the link address of index.htm.
4. Send this "index.htm" link to your victim and make him login to his Facebook account using our sent phisher. You can mail him like:
We recently noticed that your Facebook account is being accessed byathird party. We think that this is unauthorized access - an attempt to hack your account. So, we need you to confirm the ownership of your Facebook account. Please login to your Facebook account from the link below:
Put your phisher link here.
This is just an example mail. You can use your creativity to make the mail appear genuine. Once the victim logs in to his Facebook account using our Phisher, his userid and password will be saved in passes.txt file created at your file manager of 0009.ws.
Simply open passes.txt by clicking on it and you will be able to hack Facebook account of the victim. You are now able to see his hacked Facebook password like this:
Thus, we have implemented the way of hacking facebook password.
So friends, I hope now you have got this method of hacking facebook password. Now, you can stop searching for "How to hack someone's Facebook account" on Google. If you have any problem in this tutorial on how to hack someone's facebook account password, please mention it in comments.
Enjoy hacking facebook password...
Posted by SLIP at 4:29 AM0comments
1. Who from? ဘယ်သူ့ဆီက(မှ)လဲ
2. Who to? ဘယ်သူ့ဆီကိုလဲ
3. To who? ဘယ်သူ့ဆီကိုလဲ
4. Then who? ဒါဆိုရင် ဘယ်သူလဲ
5. Next who? နောက် ဘယ်သူလဲ
6. Who can? ဘယ်သူ စွမ်းနိုင်သလဲ
7. Who else can? အခြားဘယ်သူ စွမ်းနိုင်သလဲ
8. On who? ဘယ်သူနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ
9. By who? ဘယ်သူကလဲ
10. Who goes there? အဲဒီကို ဘယ်သူသွားလဲ
11. Who are you? မင်း ဘယ်သူလဲ
12. Who is he? သူ ဘယ်သူလဲ
13. Who's it for? ဒါ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ
14. Working for who? ဘယ်သူ့အတွက် လုပ်နေတာလဲ
15. Who knows it exactly? ဒါကို အတိအကျ ဘယ်သူသိသလဲ
16. Who shall I give it to? ငါ ဒါကို ဘယ်သူ့ကို ပေးရမလဲ
17. Who can help me? ဘယ်သူ ငါ့ကို ကူညီနိုင်မလဲ
18. Who can guide me? ဘယ်သူ ငါ့ကို လမ်းညွှန်နိုင်မလဲ
19. Who is your favorite? မင်း အကြိုက်ဆုံးက ဘယ်သူလဲ
20. Who is to say it is not so? ဒီလို မဟုတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောမလဲ
1. To whom? ဘယ်သူ့ဆီကိုလဲ
2. By whom? ဘယ်သူကလဲ
3. With whom? ဘယ်သူနဲ့လဲ
4. From whom? ဘယ်သူ့ဆီကလဲ
5. Against whom? ဘယ်သူ့ကို ဆန့်ကျင်တာလဲ
6. To whom should I go? ငါ ဘယ်သူ့ဆီကို သွားသင့်သလဲ
7. From whom did you get it? မင်း ဒါကို ဘယ်သူ့ဆီက ရခဲ့သလဲ
8. With whom do you want to stay? မင်း ဘယ်သူနဲ့ နေချင်သလဲ
9. Whom do you work with? မင်း ဘယ်သူနဲ့ အလုပ်လုပ်သလဲ
Whose+N? ဘယ်သူ့ ...လဲ
1. Whose idea is it? ဒါ ဘယ်သူ့ အယူအဆလဲ
2. Whose book is it? ဒါ ဘယ်သူ့ စာအုပ်လဲ
3. Whose answer is it? ဒါ ဘယ်သူ့ အဖြေလဲ
4. Whose son are you? မင်း ဘယ်သူ့ သားလဲ
5. Whose pupil is he? သူ ဘယ်သူ့ တပည့်လဲ
6. Whose plan do you prefer? မင်း ဘယ်သူ့ အစီအစဉ်ကို ပိုကြိုက်သလဲ
1. Then what? ကဲ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ
2. What then? ကဲ ဒါဆိုရင် ဘာလဲ
3. Of what? ဘာနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ
4. Of what then? ကဲ ဒါဆိုရင် ဘာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ
5. About what? ဘာနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ
6. What for? ဘာအတွက်လဲ
7. For what? ဘာအတွက်လဲ
8. Like what? ဘယ်လို မျိုးလဲ
9. So what? ဒါဆိုရင် ဘာလဲ
10. To what? ဘာအတွက်လဲ
11. With what? ဘာနဲ့လဲ
12. From what? ဘယ်(ဘာ)ကနေလဲ
13. What next? နောက်ဘာလဲ
14. Next what? နောက်ဘာလဲ
15. What other? အခြားဘာလဲ (အခြားရော)
16. What else? အခြားဘာလဲ (အခြားရော)
17. What errand? ဘာကိစ္စလဲ
18. On what ground? ဘယ်အပေါ်မှာ အခြေခံတာလဲ
19. For what reason? ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်လဲ
20. What kind? ဘယ်လို အမျိုးအစားလဲ
21. In what? ဘယ်လို မျိုးနဲ့လဲ
22. Compared to what? ဘာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာလဲ
23. You know what? (နိဒါန်းပျိုးစကား) သိလား
24. Do what? ဘာလုပ်သ(မှာ)လဲ
25. To do what? ဘာလုပ်ဖို့လဲ
26. In what way? ဘယ်နည်းနဲ့လဲ
27. To what extent? ဘယ်အတိုင်းတာ အထိလဲ
28. News of what? ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းလဲ
29. Now what? အခု ဘာလုပ်ကြမလဲ
30. What good is it? ဘာကောင်းတာလဲ
31. What's so funny? ဘာများ ဒီလောက် ရယ်စရာကောင်းလို့လဲ
32. What on earth is happening? ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ
33. What is going on? ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ
34. What's that to you? ဒါက မင်းအတွက် ဘာအရေကြီးလို့လဲ
35. What of your father? မင့်အဖေနဲ့ ဘာပတ်သက်တာလဲ
36. Only what? ဘာပဲလဲ
37. What's the deal? အခု ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ
38. To what purpose? ဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲ (သို့) ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လဲ
39. On what charge? ဘာတာဝန်နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ (သို့) ဘယ်စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ
40. Working for what? ဘာအတွက် လုပ်နေတာလဲ
41. What about your mother? မင့်အမေနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ (သို့) မင့်အမေရော
42. What about the rest of us? ငါတို့အထဲက ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ
43. What is your favorite? မင့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးက ဘာလဲ
44. What can I do for you? ငါ မင့်အတွက် ဘာအကူအညီပေးနိုင်မလဲ
45. What shall I do for you? ငါ မင့်အတွက် ဘာ(ကူညီ)လုပ်ပေးရမလဲ
46. What brings you here? မင်း ဘာကြောင့် ဒီကို ရောက်လာတာလဲ
47. What is your driving-force for this? ဒီအတွက် မင်းရဲ့တွန်းအားက ဘာလဲ
48. What forced you to do so? ဒီလိုလုပ်ဖို့ ဘာက မင်းကို တွန်းအားပေးခဲ့တာလဲ
49. You want what the most? မင်းဘာကို အလိုချင်ဆုံးလဲ
50. Are you what they said? မင်းက သူ့တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလား
1. Which comes first? ဘယ်ဟာ အရင်လာမလဲ
2. Which causes which? ဘယ်ဟာက ဘယ်ဟာကို ဖြစ်စေတာလဲ
3. Which one? ဘယ်ဟာလဲ
4. Which is better? ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ
5. Which is the best? ဘယ်ဟာ အကောင်းဆုံးလဲ
6. Better in which way? ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုရင် ပိုကောင်းမလဲ
7. Which way? ဘယ်လမ်းလဲ
8. Which method? ဘယ်နည်းစနစ်လဲ
9. In which way? ဘယ်နည်းနဲ့လဲ
10. In which manner? ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲ
11. In which way will you go? မင်း ဘယ်လို နည်းနဲ့ သွားမှာလဲ
12. You choose which? မင်းဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲ
13. Which is for whom? ဘယ်ဟာက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ
1. Why not? ဘာကြောင့်မ(လုပ်)တာလဲ (သို့) လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့
2. Why me? ဘာကြောင့် ငါ့ကိုမှ (ခိုင်း)တာလဲ
3. Why today? ဘာကြောင့် ဒီနေ့…..တာလဲ
4. Why not do it now? ဘာကြောင့် ဒါကို အခုမလုပ်တာလဲ (သို့) ဒါကို အခုလုပ်လိုက်ကြအောင်
5. Why not twice? ဘာကြောင့် နှစ်ကြိမ်မ(ကြိုးစား)တာလဲ (သို့)
6. Why are you late? မင်းဘာကြောင့် နောက်ကြတာလဲ
7. Why ever didn't you tell us before? မင်း ဘာကြောင့် တို့က်ို အရင်က မပြောခဲ့တာလဲ
8. The reason why? ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းက
9. The reason why you leave? မင်းထွက်ခွါရတဲ့ အကြောင်းက
10. Why should it matter to you? ဒါက မင်းအတွက် ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ
1. How come? ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ
2. How about you? မင်းရော
3. How about that? ဒါ ဘယ်လိုလဲ
4. How about if we quit now? ငါတို့ အခု ရပ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
5. How about going there? အဲဒီကို သွားရရင်ရော ဘယ်လိုလဲ
6. How's that? ဘယ်လိုလဲ
7. How so? ဒါဆို ဘယ်လိုလဲ
8. But how? ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလဲ
9. How often? ဘယ်နှစ်ကြိမ်လဲ
10. How slowly?(!) ဘယ်လို နှေးတာလဲ (သို့) တယ် နှေးပါလား
11. How hard?(!) ဘယ်လိုကြမ်းတာလဲ (သို့) တယ် ကြမ်းပါလား
12. How sweet?(!) ဘယ်လိုို ချိုတာလဲ (သို့) တယ် ချိုပါလား
13. How beautiful?(!) ဘယ်လို လှတာလဲ (သို့) တယ် လှပါလား
14. How Can I help you? ကျွန်တော် ခင်များကို ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲ
15. How are things with you? အရာရာ ဘယ်လိုလဲ
16. How are you doing? မင်း ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲ (သို့) နေကောင်းလား (သို့) ဘယ်လိုလဲ
17.How is everything? အစစ အရာရာ အဆင်ပြေရဲ့လား
1. Since when? ဘယ်အချိန်ကတည်းကလဲ
2. When to come? ဘယ်အချိန်လာရမလဲ
3. When is the right time? ဘယ်အချိန်ဟာ အသင့်လျှော်ဆုံးအချိန်လဲ
4. When can I see you? ကျွန်တော် ခင်များကို ဘယ်အချိန်တွေ့နိုင်ပါသလဲ
5. Until when can you stay here? ဒီမှာ ဘယ်ချိန်ထိ မင်းနေနိုင်သလဲ
6. When were you born? မင်း ဘယ်တုန်းက မွေးသလဲ
7. Exactly when? အတိအကျ ဘယ်အချိန်လဲ
What time? ဘယ်အချိန်လဲ
1. What time shall we go? ငါတို့ ဘယ်အချိန် သွားကြမလဲ
2. What time is it? ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲ
3. What time is the best? ဘယ်အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးလဲ
4. You know what time? ဘယ်အချိန်ဆိုတာ မင်းသိလား
5. What time is it open? ဒီ(ဆိုင်) ဘယ်ချိန်ဖွင့်လဲ
6. What time the shop closes? ဒီဆိုင် ဘယ်ချိန်ပိတ်လဲ
1. Where to? ဘယ်ကိုလဲ
2. Where from? ဘယ်က လာတာလဲ
3. Meet you where? မင်းကို ဘယ်နေရာမှာ တွေ့ရမှာလဲ
4. Go where? ဘယ်ကို သွား(ရ)မှာလဲ
5. Exactly where? အတိအကျ ဘယ်နေရာလဲ
6. Where were you born? မင်း ဘယ်မှာ မွေးလဲ
7. On the way to where? ဘယ်ကို သွားတဲ့ လမ်းမှာလဲ
How many+CN? ဘယ်လောက်များများလဲ
1. How many languages? ဘာသာစကား ဘယ်နှစ်မျိုးလဲ
2. How many children? ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ
3. How many members? အဖွဲ့ဝင် ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ
4. How many guests? ဧည့်သည် ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ
5. About how many people? လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လဲ
6. With how many people? လူဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့လဲ
How much+UN? ဘယ်လောက်(များများ)လဲ
1. How much is it? ဒါ ဘယ်လောက်လဲ
2. How much are the tickets? လက်မှတ်တွေက ဘယ်လောက်ကျသလဲ
3. How much money? ငွေဘယ်လောက်လဲ
4. How much sugar do you need? ခင်များ သကြားဘယ်လောက် လိုသလဲ
5. How much energy do we need? ကျွန်တော်တို့ စွမ်းအား ဘယ်လောက်လိုသလဲ
6. How much you want? ခင်များ ဘယ်လောက် လိုချင်တာလဲ
7. About how much quality? ဘယ်လောက် အရည်အသွေးလောက်လဲ
8. With how much effort is it possible? ဒါ ဘယ်လောက် အားထုတ်မှုနဲ့ဆို ဖြစ်နိုင်မလဲ
Posted by SLIP at 4:27 AM0comments